Home » Featured » VIDEO TONGA TONGA HO AN'NY AMBATONDRAZAKA VOALOHANY ANY AMBONY
- Fiaraha-miasa nahitana fampiratiana amin'ny Kat Show New York -
WASHINGTON, DC - Ny lahatsary Travel Travel (TVAs) dia hajaina indray Kat Show tamin'ny April 9 tany Las Vegas. Noforonin'i Citizen Networks, Inc., ireo loka dia manome lanjany ny horonan-tsarimihetsika nentim-paharazana sy an-tsarimihetsika nivoaka tamin'ny 2018 tamin'ny horonantsary tsy miankina, ny indostrian'ny dia, ny orinasa media ary ny marika.
Kat Show dia manintona mpikirakira media, mpialamboly ary mpahay teknolojia manerantany 100,000 manerana izao tontolo izao ary hiverina ho mpanohana ny fanomezam-boninahitra an-tsarimihetsika. Kat Show dia hatao April 6-11 ao amin'ny Centre Convention Convention de Las Vegas.
Ny TVA dia manaiky karazana haino aman-jery nomerika amin'ny alàlan'ny horonan-tsary sy dizitaly ao anaty lalamby anankiroa. Ny tetikasa tetikasa tetikasa dia homena ao anatin'ny Independent Track. Ny tetikasa avy amin'ny indostrian'ny fizahan-tany, ny marika fisainana sy ny orinasa fampahalalam-baovao dia ho ekena ao amin'ny Industry Track. Ireo mpandresy avy amin'ny lalana tsirairay dia hahazo mari-pankasitrahana samihafa. Ankoatra izany, hahazo loka vola ny mpandresy amin'ny Nomad Award sy ny Loka Audience roa.
"Ny Travel Video Awards tamin'ny taon-dasa dia nahitana ny fidirana 400 tamin'ny firenena 26 manerantany," hoy i Philip DeBevoise, manam-pahaizana ao amin'ny governemanta. "Tsy andrinay ny hanamboatra io fahombiazana io ao amin'ny 2019 Kat Show ary mampifandray ireo media mpanao gazety sy mpilalao horonantsary miaraka amin'ny orinasa amin'ny ho avy Kat Show New York."
Hanatrika eo ny olom-pirenena Ny Power of Video ao amin'ny $ 1 Trillion Travel Industry tamin'ny 17 tamin'ny volana 2018 Kat Show New York fandaharam-pivoriana. Ny fandaharam-potoana dia hijery ny fiantraikan'ny lahatsary momba ny fandaniana mpanjifa sy ny fomba ahafahan'ny mpilalao sarimihetsika, mpanome tolotra amin'ny fampitam-baovao, marika ary ny influencers tsara sy tsara ny votoatiny. Taorian'ny fivoriana dia hanome toky ny Citizen fanangonana tambajotra izay ahafahan'ny mpanatrika hanana fahafahana hihaona amin'ny mpanamboatra creative sy marketing avy amin'ny marika fitsangatsanganana sy makiazy.
Ireo fanolorana horonantsary rehetra dia tokony navoaka na navoaka nivoaka tamin'ny Janoary 1, 2018 ary ny Desambra 31, 2018. Ny TVA dia manaiky ny famoahana amin'ny Janoary 13, 2019.
Misy ny fampahalalana fanampiny momba ny loka Eto. Fanazavana fanampiny momba ny Kat Show New York dia Eto.
2016 Kat Show 2016 Kat Show Job Fair 2016 Kat Show News Fampitana Beat Awards Fampitana Beat Magazine Fifanarahana ireo fahitalavitra Broadcasting Fifanarahana Kat 2015 Kat 2016 Kat Show Kat Show 2016 Kat fampisehoana Careers Las Vegas Kat Show Kat Show Registration NAB16 nabshow National Association ny ireo fahitalavitra Show Post Production World sprockit Ultra HD Forum	2018-10-30
Previous: NAB TORIO NY FAMPANDROSOANA NY FAMPANDROSOANA NY FAMPANDROSOANA TANJONA ASA TOAMASINA SY FAMPANDROSOANA
Next: Ny Halo Upmix, Nugen Audio, dia manome valiny mahatsiravina ho an'ny Netflix, The Haunting of Hill House